Turkey Archives - na rayhab
Turkey ụgbọ okporo ígwè, bụ obodo na map Pịa na-agụ n'okporo ụzọ na cable ụgbọ ala ozi ọma!
Fethiye Chamber nke Azụmaahịa na Industrylọ ọrụ, tandem paraglging pilot iji mee ka iru eru nke ndị ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka asambodo nke ụkpụrụ ikike ọkachamara. Fethiye Chamber of Commerce na Mmeputa, Babadağ [More ...]
Ebe eriri İZBAN na-agafe ala ala dị na Karşıyaka dị na mpaghara elu nke andiğli ma a hụrụ ya dịka nsogbu dị ka ekewa mpaghara ahụ ụzọ abụọ, e guzobere Kọmịshọn na Nnukwu Nchịkwa Kọmitii na kansụl obodo. E guzobere Kọmịshta Ihe na Nnukwu Nchịkwa Njikọ na iniğli Obodo. [More ...]
Ọnọdụ ngbanwe na ngbanwe a na-agbanwe agbanwe na-agbanwe ndị mmadụ ruo n'ókè nke nnupụisi. Free Kocaeli bụ a eluigwe na-eto eto na-agụ akwụkwọ, ọ jụrụ ma ọ bụrụ na ọ ka mma na ọnụ ọgụgụ nke ibu ụgbọ oloko na-enweghị mmalite Adapazari mahadum. Ndị na-agụ akwụkwọ anyị na-agbaso ụgbọ oloko ahụ [More ...]
Taa na History 21 August 1941 Akpınar-Kurukavak (5. Km) ka etinyere n'ọrụ. Akụkọ Railway yiri nke a na You nwere ike Inwe Mmasị: 21 August 1941 Akpınar-Kurukavak (5. Km). 21 / 08 / 2012 21 August 1941 Akpinar-Kurukavak (5 km) bụ mpaghara kachasị ewu ewu na obodo. [More ...]
Akụkọ 20 August 1927 Mwube nke kütahya-Balıkesir malitere site na Kütahya. 29 malitere na November site na Balıkesir. Ozi Railway yiri ya na Akụkọ ndị ọzọ Ị nwere ike inwe mmasị na Ụbọchị: 20 August 1927 Construction nke Kütahya-Balıkesir akara malite na Kütahya 20 / 08 / 2012 20 [More ...]
Obodo Kocaeli, TCDD'ye 3-storey service house emeela nkwekọrịta Protocol. Kocaeli Metropolitan Municipality, mere protocol nkwekọrịta na Republic of Turkey State Railways (TCDD) na n'aka ekpe 3 akụkọ ọrụ ụlọ. Mpempe ala a na-ahụ anya nke ụlọ ahụ nwere mpaghara pere mpe nke 910 [More ...]
Hasbọchị izizi nke ọrụ Kanal Istanbul, nke dị ezigbo mkpa maka Bosphorus, ekwuputala! N'afọ a 30 ga-ekpughere ozioma nke Kanal Istanbul na August 2019. Victbọchị Mmeri 30 August dị mkpa na nhọrọ nke akụkọ ihe mere eme 30 August. Turkey si [More ...]